Wararka - Geng Shuang wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dagaalka Beesha Caalamka ee lagula jiro Coronavirus-ka cusub, Fadlan ixtiraam xaqiiqda, sayniska iyo kuwa kale.
Ku saabsan EISEN
Geng Shuang wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dagaalka Beesha Caalamka ay kula jirto Coronavirus-ka cusub, fadlan ixtiraam xaqiiqda, sayniska iyo kuwa kale.
20-kii Maarso, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Geng Shuang ayaa shir gudoomiyay shir saxaafadeed caadi ah. Weriye ayaa weydiiyay, dhawaan, qaar ka mid ah aqoonyahannada reer galbeedka waxay sheegeen in alaabada laga soo iibiyo Shiinaha ay leeyihiin koronaviraro cusub. Isla mar ahaantaana, waxaa sidoo kale jira xoogaa doodo ah oo ku saabsan "alaabta lagu sameeyo Shiinaha oo sidda fayras, oo ku baaqaya in la qaadaco ka sameynta Shiinaha". Waa maxay faalladaadu?
Geng Shuang wuxuu ku jawaabay tan iyo markii uu dillaacay cudurka, inuu arkay dadka qaar oo faafinaya warar aan xilkas ahayn si argagax loo abuuro. Ma garanayo ujeedka dadkan macno darrada ah, jaahilnimada iyo hadalada xasaasiga ah, in buuq la sameeyo ama adduunka la khiyaaneeyo?
Geng Shuang wuxuu sheegay in Shiinuhu uu yahay wadan wax soo saar weyn, sidoo kalena waxsoosaar weyn iyo dhoofiya kahortaga cudurada faafa iyo agabyada caafimaad (kn95, maaskaro FFP2, iwm). Waqtigan xaadirka ah, xaaladda cudurka ayaa ku sii fidaya adduunka oo dhan. Wadamo badan ayaa wajahaya yaraanta qalabka ka hortaga cudurada faafa sida maaskaro difaaca, dharka difaaca iyo hawo-mareenada. Waxay rajeynayaan inay kaalmo ka helaan Shiinaha ama ay wax ka iibsadaan Shiinaha. Intii ay la dagaallamayeen xaaladda cudur ee faafa ee Shiinaha, Shiinaha wuxuu ka gudbay dhibaatooyinkiisii, wuxuu siiyay oo uu sii wadi doonaa inuu siiyo gargaar inta uu awoodo dalalka u baahan una fududeeyo wax soo iibsiga ganacsi ee Shiinaha. Dhaqanka mas'uuliyadda Shiinaha ayaa bulshada caalamku si weyn u ammaantay. Hadday Shiinuhu tahay Shiinaha Shiinaha, Shiinuhu wuxuu qori doonaa cudurka oof-wareenka ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia'. Haddii qof yiraahdo "Shiinaha waa sun", fadlan wac dadka noocaan ah si ay ula kulmaan taaj cusub oof-wareenka dillaaca. Ha xidhnayn maaskaro KN95 oo lagu farsameeyo Shiinaha (FFP2, maaskaro la tuuri karo). Ha xidhin dharka difaaca ee lagu sameeyay Shiinaha, ha u isticmaalin Shiinaha waxyaabaha ay ka soo dhoofsato neefsashada, si aanad u qaadin fayraska.
Geng Shuang wuxuu carabka ku adkeeyay in dagaalka beesha caalamku kula jirto coronavirus-ka cusub, fadlan ixtiraam xaqiiqooyinka, sayniska iyo kuwa kale. Tan ugu muhiimsan, naftaada ixtiraam. Xitaa halka sayniska uusan si kumeelgaar ah u gaari karin, ilbaxnimadu wali wey imaan doontaa.
SHENZHEN EISEN Warshadaha LIMITEDKUANGYE DONGGUAN TECHNOLOGY CO., LTD